UMengameli uphinde waxegisa eye-Corona - Ilanga News
Home Izindaba UMengameli uphinde waxegisa eye-Corona
UMengameli uphinde waxegisa eye-Corona
ITHEMBA kubantu abasebenza ezindaweni zokudlela, ezamabhayisikobho, ama-casino, ezokulala, ezokuzicwala nokuhlelwa kuzona imihlangano njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa ememezele izolo ngoLwesithathu ukuthi le mikhakha yomnotho izovulwa kungensuku zatshwala njengoba izwe livaliwe ngenxa yeCovid-19.
Uthe uhulumeni uzomemezela ukuthi le minxa yezamabhizinisi izoxegiswa nini, yize ezindaweni okungenwa kuzona kusazoqhutshekwa nokuqashwa kwesibalo sabantu.
Uthe uma imigomo isixegisiwe kule minxa yomnotho, abantu sebengakwazi ukuzihlalela endaweni yokudlela, badle.
Uveze nokuthi kunethemba ngomshanguzo wase-England kodwa okhiqizwayo naseNingizimu Afrika, iDexamethasone, ekulweni ne-coronavirus. Uthe kubantu abawu-80 412, abahaqwe yiCovid-19, abawu-34 412 kubo basindile, abawu-1 674 badlula emhlabeni. “Impi esibhekene nayo yeCovid-19 kayifani nokugijima ibanga elifishane, yinto ezothatha isikhathi,” kusho umengameli.
Akayishiyanga eyokubulawa kwabesifazane ngabesilisa, okubhilitile kulezi zinsuku njengoba eze wathi kuzomele kucutshungulwe indaba yokuvunyelwa kokuphuzwa kotshwala uma kungukuthi bunomthelela kulolu dlame.
“Abantu abahlukumeza abesifazane nezingane kumele bathole izigwebo eziqatha. Abahlukumezi bayaziwa emiphakathini, baphila nathi. Uma behlekisa ngabesifazane ngenxa yendlela abagqoka ngayo, nathi simdibi munye nalobu bugebengu.
“Ukuze siphumelele ukulwa nobudlova obubhekiswe kwabesifazane, kudingeka umphakathi wonke ufake igxalaba. Singabavikela kanjani abantu abaphuza ngokweqile?
“Kufanele sigqugquzele intsha ukuba iphuze ngendlela ehlelekile, bese siqinisa umthetho kwabadayisa utshwala. Kuyadingeka ukuba kube nezinhlelo zokweseka labo asebenenkinga yophuzo oludakayo,” kusho uMengameli Ramaphosa othe isibalo samacala ahambisana nendluzula sinyukile emuva kokuba kuxegiswe imigomo yokuvalwa kwezwe mhla lulunye kuNhlangulana (June).
Uthe into izwe eliyifundile kulezi zinsuku eziwu-100 zokuvalwa kwalo, wukuthi siyizwe elibekezelayo.
* Kusenjalo, kuzodilizwa izisebenzi ezilinganiselwa ku-22 000 zase-Edcon Holdings ephethe izitolo okubalwa kuzona i-Edgars noJet. Zithole izincwadi zokudilizwa njengoba le nkampani ithi ishayeke kakhulu ngesikhathi sokuvalwa kwezwe nangenxa kagqamcishi kagesi (load-shedding).
Previous articleKukhalwa ‘ngamandla’ kufa osomatekisi
Next articleAbazali bavale isikole